Duqii Muqdisho: Waa laga gaabiyey ballan qaadyadii qaraxii 14-ka October – Somali Top News
Duqii Muqdisho: Waa laga gaabiyey ballan qaadyadii qaraxii 14-ka October
October 14, 2019 Somali Top News	0 Comments Duqii Muqdisho: Waa laga gaabiyey ballan qaadyadii qaraxii 14-ka October
Guddoomiyihii hore ee maamulka goobolka Banaadir, ahaana Duqii Muqdisho, Taabid Cabdi Maxamed ayaa ka sheekeeyey xasuustiisa ku aadan qaraxii xooganaa ee 14 October oo maanta laga joogo muddo 2 sano ah.
Taabid oo wareysi siiyey TV-ga Dalsan ayaa sheegay in aan sinaba looga kabsan doonin dhacdadaas oo si weyn u taabatay dadka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Taabid oo xiliggaasi ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa tilmaamay in weli uu xusuusto gurmadkii loo fidiyey dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi iyo sida ay ugu midoobeen Ummadda Soomaaliyeed.
Waxaa kale uu sheegay in laga gaabiyey in la fuliyo ballan qaadyadii iyo talo soo jeedintii Guddigii Gurmad Qaran, si loogu diyaar garoobo ama looga gaashaanto dhibaatooyinka noocaan oo kale ah.
“Dareen weyn baa la muujiyay Umadda Soomaaliyeed waxay diyaar u aheyd dowladooda inay garab istaagto, naf iyo maal la huro, Alshabaab oo dhibkaas weyn geysata meel looga soow ada jeesto, balse ma aysan dhicin, waxaa loo baahanaa dad ku haga oo hoggaamiya kuna horkaca, si loo xaqiijiyo himiladaas, habacsanaan dhacda iyo ilduuf ka dhacay dowladda, fursadaas ay ka dayacantay dareenkii maalintaas bannaanka u soo baxayna aan laga faa’ideysan, waxay noqotay mid la hilmaamay dadkiina guryahooda isaga laabtaan,”ayuu yiri Taabit Cabdi Maxamed.
Qaraxan oo ay ku dhinteen boqolaal qof, kuna dhaawacmeen boqolaal kale ayaan weli ka go’in xasuusta dad badan, iyadoona maanta labo snao kaidb laga xusayo gudaha magaalada Muqdisho.
← Sarkaal ka soo goostay Al shabaab oo lagu toogtay Kismaayo
Muqdisho oo maanta si weyn looga xusayo Qaraxii Soobe Labo sano kadib →
Deg Deg: Dagaal ka socda gobalka Galgaduud
Qodobo xasaasi ah oo la filayo iney ka soo baxaan shir deg deg ah oo Dani isugu yeeray Golahiisa Wasiirrada